डा. शेखर कोइराला « Image Khabar
काठमाडौं, पुष २१ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कुन मापदण्डको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनित गरिएको हो भनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको छ । बुधबार नेता कोइरालाले
शेखर कोइराला पक्षको बृहत् बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक आज बस्ने भएको छ । महाधिवेशन र त्यसपछिको पार्टी भित्रको अवस्थाको समीक्षा गर्ने भन्दै डाकिएको बैठक दिउँसो २ बजे सिंहदरबार
देउवा पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गरेको शेखरको आरोप
काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी अधिवेशनमा रोल्पा,
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले साफ फुटवल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा खेलाडी एवं प्रशिक्षकलाई बधाई दिनु भएको छ । कोइरालाले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै माल्दिभ्सको मालेस्थित
काठमाडौं, असोज २५ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गुटको राजनीतिका कारण कांग्रेस पार्टी लथालिङ्ग भएको बताउनुभएको छ । कांग्रेस सभापतिको हैकम र मनोमानीले पार्टीको विधान समेत धूजा/धूजा पारेर
सरकारले बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ : डा. शेखर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले देशमा बेरुजु र अनियमितताको अंक बढ्दो रहेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले बेरुजु फर्छ्यौट र अनियमिता गर्नेलाइ कारवाही गर्ने तर्फ